अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श – Page4– Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श (page 4)
अमेरिकामा कार्यरत नेपाली वकिललाई प्रश्न
February 14, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यागमनसम्बन्धी नियमकानूनमा परिवर्तनको साथै गैरकानूनीरुपमा धरपकड र डिपोर्ट गर्ने हल्ला अहिले चलिरहेको छ। मेरो असाइलमका केस पूर्णरुपमा अस्वीकृत भएर अहिले टीपीएसको सुविधाअनतर्गत बसिरहेको छु। टिभी र समाचारहरुमा गैरकानूनीरुपमा बस्नेलाई तुरुन्त निस्कासित गर्ने कारबाहीहरु भएकाले हामी नेपालीहरुलाई के–कस्तो समस्या आइपर्ला भनी यो प्रश्न राखेको छु। झर्को नमानी बताइदिनुहुन्छ भन्ने …
राष्ट्रपतिको तीन कार्यकारी आदेश र आप्रवासीको त्रास
January 31, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श, विचार 0
हालै जारी गरिएको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अध्यागमनसम्बन्धी कार्यकारिणी आदेशहरुले अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरुबीच त्रास छाएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त कार्यकारी आदेशसम्बन्धी केही नेपालीहरुले पनि पंक्तिकारलाई जिज्ञासा राखेका थिए । न्यूयोर्कमा रहेका प्रकाश, डोमालगायतका नेपालीहरुको जिज्ञासा यस्तो थियो– राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले विभिन्न भिसामा रहेका वा भिसा समाप्त भएका शरणार्थीको निवेदन, भिसा म्याद …
January 24, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले भर्खरै युएस सिटिजनसिप प्राप्त गरेको छु। मेरो कान्छी आमापट्टिबाट २ जना भाइ छन्। अहिले उनीहरु नेपालमा छन्। आमाहरु भिन्दै भए पनि बुबा एउटै हुनुहुन्छ। बुबा बित्नुभएको धेरै भयो। के मैले मेरा भाइहरुलाई पेटिसन गर्न सक्छु होला? कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। – के. गुरुङ, न्यूयोर्क युएस सिटिजनले आफ्नो इमिडियट रिलेटिभहरु …
January 10, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मेरो बीएको ग्राजुएसन २०१५ मा भएपछि एक वर्षको ओपीटी थियो। टीपीएस आएकाले टीपीएसका लागि दर्ता पनि गरें। यसपालि समयमै टीपीएसको पुनः दर्ता पनि गरें। मेरो ओपीटी समाप्त भए पनि इलिगल भएर नबस्ने इच्छा भएकोले एफ–१ भिसा कायम राख्नका लागि भ्याकेसनल कोर्स गरेर एफ–१ भिसा कायम गरिराखेको थिएँ। अहिले झण्डै १ …
January 3, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले फेमिली पेटिसनको आधारमा ग्रीनकार्ड पाएको हो। नेपालमा पारिवारिक कामले गर्दा ६ महिनाभन्दा बढी बस्नुपर्ने स्थिति छ । साथीहरुबाट सुनेअनुसार ६ महिनाभन्दा कम अवधिमै फर्कनुपर्छ भन्ने सुनें, नभए ग्रीनकार्ड खोसिन सक्छ रे। कति समयसम्म अमेरिकाबाट बाहिर बस्न सकिन्छ? यसरी बाहिर बस्दा पछि युएस सिटिजनसिपका लागि आवेदन गर्ने बेलामा अप्ठ्यारो पर्छ …
December 27, 2016 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
विश्व सन्देश साप्ताहिकबाट कानूनी प्रश्नको जबाफ निरन्तररुपमा दिई नेपाली समुदायलाई सेवा पु¥याउनुभएकोमा कानुनविद् रमेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा मेरो आफन्तको पनि एक प्रश्न भएकोले तपाईंसामु विश्वसन्देश पत्रिकामार्फत राख्दैछु। मेरो दाइको लागि पेश गरेको आई–१३० पेटिसनमार्फत अब नेपालमा भिसा लाग्ने भएको छ । मेरो दाइ, भाउजु र सानी छोरी …
December 20, 2016 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले मेरो शरणार्थीको निवेदन स्वीकृति भएको आधारमा आई–४८५ एप्लिकेसन एक वर्षअघि युएससीआईएसमा पेश गरेको थिएँ। साथीहरुको सल्लाहअनुसार आई–४८५ एप्लिकेसनको फी नराखी फी वेभरको फर्म आई–९१२ भरेर पठाएको थिएँ। निवेदन प्राप्त भएको रिसिप्ट र फिङ्गर प्रिन्टको एप्वोइन्टमेन्ट पनि आयो। फिङ्गर प्रिन्ट्स दिएको पनि ९ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म ग्रीनकार्ड आएन। इन्क्वायरी गर्दा …
December 13, 2016 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म सी–१ भिसामा अमेरिका आएको छु। म शीपमा काम गर्ने हैसियतले अमेरिकामा पस्ने मौका पाएको छु। मेरो सी–१ भिसा १ महिनासम्म भ्यालिड छ। जहाजमा धेरै वर्ष काम गरे पनि खास स्थायित्व पाउन नसकेकाले गर्दा यतै अमेरिकामा मिलेसम्म बस्ने विचार गरेको छु। म अविवाहित भएकोले नेपाल फर्किहाल्नु पर्ने कारण छैन। साथीहरुले …
November 29, 2016 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म युएस सिटिजन हुँ र मैले मेरो श्रीमान्का लागि भिसा पेटिसन फायल गरी मेरो श्रीमान्ले युएस एम्बेसी, काठमाडौंमा पनि अन्तरवार्ता दिनुभयो। अन्तरवार्तापछि एम्बेसीले एडमिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ भनेर ८ महिनासम्म केस होल्ड गरेर राख्यो। केही दिनअघि युएस एम्बेसीले मेरो श्रीमान्लाई बोलाएर पोसपोर्ट र ओरिजिनल डकुमेन्टहरु फिर्ता दिएर पठाएछ। मैले एम्बेसीमा इन्क्वायरी गर्दा …
October 26, 2016 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
कानूनी स्तम्भमार्फत महत्वपूर्ण कानूनी सल्लाह–सुझाव उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा विश्वसन्देश साप्ताहिकलाई धेरैधेरै धन्यवाद। मैले लगभग ७ महिनाअगाडि मेरो युएससीआईएस एसाइली स्टाटस एक वर्षभन्दा बढी भएको आधारमा आई–४८५ एप्लिकेशन पेश गरेको थिएँ र आई–४८५ एप्लिकेशनपश्चात् बायोमेट्रिक टेस्ट दिएको पनि साढे ६ महिना भइसक्यो। सोपश्चात् हालसम्म कुनै अपडेट आएको छैन। युएससीआईएसको अनलाइन केस स्टाटसमा …